Iwe unogona kuita akasiyana epasi kurovedza muviri pane iyo yoga mat: iyo yoga, kusundira-kumusoro, maekisesaizi, kugara-kumusoro, nezvimwe mativi ese anogona kushandiswa, nekugona kwakanaka. Dzivisa marwadzo uye mamaki matema munzvimbo dzakasiyana dzemuviri panguva yekurovedza muviri.
Iyo yakasununguka muganho inoderedza kukuvara kwetsaona kunokonzerwa nemitambo. Zvigadzirwa zvekubatsira zveyoga tsika. Paradzira iyo yoga mat yakati sandara pasi uye ita iyo yoga kurovera pairi kudzivirira kupwanya kwemuzongoza, makumbo, hudyu mabhonzo, mabvi majoini uye zvimwe zvikamu.
Mushure mekuita maekisesaizi, unogona kumonera iyo yoga mat, uikiyire nebvudzi bhureki, woiisa muhombodo yako, iri nyore uye ine hutsanana.
Pashure: Makobvu ekusona epasi mateti, matsamba anokambaira, furo bhuru repasi mats, imba yekutandarira uye yekurara yakazara dzimba dzekuvata
Zvadaro: Thicken yoga bonde Eva zvinhu varume nevakadzi kugwinya bonde Ruviri-mativi solid solid goo mat
Yevana yekurara dambanemazwi pasi mwana kukamba ...
Kusona Velvet Floor Mat Suede Carpet Dambanemazwi ...
Stitching Velvet bonde uriri suede kapeti puz ...
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Furo Rakajeka, Floor Mat Puzzle, Floor Rakajeka, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Zvese Zvigadzirwa